Xildhibaanada cusub ee BF oo kulan la isugu yeeray berri iyo ajendaha - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaanada cusub ee BF oo kulan la isugu yeeray berri iyo ajendaha
Xildhibaanada cusub ee BF oo kulan la isugu yeeray berri iyo ajendaha
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalinta berri ah yeelanaya kulan weyne wada-jir ah, kadib markii uu maanta guddiga qaban-qaabada doorashada guddoonka uu shaaciyay in uu dejiyay jadwalka doorashada.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, Xildhibaanada ayaa goordhoweyd waxaa loo diray fariin sheegaysa in maalinta berri ah saacadu markay tahay 9:00 subaxnimo uu goluhu leeyahay kulan.
Fariinta loo diray Mudaneyaasha labada gole ayaa waxaa lagu sheegay in ajendaha kulankaas uu yahay Ansixinta wax ka bedelka habraaca ku-meel-gaarka ah ee u gaar ah doorashooyinka guddoonka labada gole iyo Madaxweynaha.
Sidoo kale waxa lagu kala qaadan doono kulankaas warbixin ku saabsan howlaha u qabsoomay iyo kuwa soo socda ee Guddiga qaban-qaabada Golaha Shacabka.
“Mudane Xildhibaan Beri oo Isniin ah Tariikhdu tahay 18 April, waxaa jira Kulan weyne Wadajir labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Agendaha: 1. Ansaxinta wax ka badelka Habraaca ku-meel-gaark ah ee u gaarka ah Doorashooyinka Guddoonka labada Gole iyo Madaxweynaha iyo 2. Warbixin ku saabsan hawlaha u qabsoomay iyo kuwa soo socda ee Guddiga Qabanqaabada Golaha Shacabka – Saacadu waa 09:00 subaxnimo,” ayaa lagu yiri farriinta.
Guddoonka Ku-meel-gaarka ah ee labada Gole ayaa hore iskula qaatay in la dardar-geliyo doorashada guddoonka, ayada oo labada dhinac ay soo saareen guddiyo ka shaqeeya arrintaas.
Guddoomiyaha cusub ee guddiga qaban-qaabada doorashada guddoonka Golaha Shacabka oo goor sii horeysay la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in waqtigu uu ku yar-yahay, islamarkaana ay tahay in sida ugu dhaqsaha badan ay u dhacdo doorashada guddoonka labada aqal, si loogu sii gudbo doorashada madaxweynaha.
Doorashada Soomaaliya oo muddo badan soo jiitamaysay ayaa hadda mareysa heer geba-gebo ah, ayada oo tallaabooyinkaan ay muhiim u yihiin qabsoomida doorashada madaxweynaha ee afarta sano ee soo socota, taas oo loo geli doono loolan culus.